Iphansi lezemidlalo le-PVC - Isazi seZD Floor
Ikhaya > Iphansi lezemidlalo le-PVC
Iphansi lezemidlalo le-PVC
Hlela: UDenny　2020-03-27　Iselula
1. Izinkinga ze-Comfort:
Ingaphezulu lephansi lezemidlalo le-PVC elihunyushiwe lingonakaliswa ngokulingana lapho lithinteka, kufaka umatilasi ovaliwe ovulekile onomoya ngaphakathi.Uma uxabana noma ushibilika, umphumela we-cushioning onikezwe ubuchwepheshe obuvaliwe bokuxhasa igwebu unganciphisa Ukulimala kwezemidlalo.
I-Tremor ibhekisa endaweni lapho phansi inceketeke khona ngenxa yomthelela. Lapho kukhudlwana ububanzi bendawo yokuqhaqhazela, maningi amathuba okuthi kubange ukugqabhuka. Kunezinhlobo ezimbili zokuthuthumela: iphuzu lokuthuthumela nokuthuthumela kwesifunda.
3.Izinkinga ngokufakwa kwe-vibration:
Ukushayelwa okwenziwe ngabantu ngesikhathi sokuzivocavoca kuzodala ukudlidliza okuphezulu kwephansi yemidlalo ye-PVC. Isakhiwo sephansi kumele sibe nomsebenzi wokumunca ukushaqeka, okusho ukuthi phansi kufanele kube namandla okuthola amandla wethonya. Amandla wethonya mncane kakhulu kunasemhlabathini olukhuni, njengasesiteji sikakhonkolo. Lokho ukusho ukuthi, lapho abasubathi begxuma bewa phansi, okungenani ama-53% omthelela kufanele adonswe phansi phansi, ukuze kuvikelwe i-ankle yomsubathi, i-meniscus, intambo yomgogodla nobuchopho, ukuze abantu bangaphazamiseki ngesikhathi sokuzivocavoca. Kubuhlungu. Umsebenzi wayo wokuvikela ubheka nokuthi umuntu angeke athinte abantu abaseduze lapho bezivocavoca enkundleni yezemidlalo ye-PVC. Lona ngumqondo wokufaka i-vibration, i-vibration deformation kanye ne-deformation enwetshiwe echazwe ku-DIN standard yaseJalimane.
4.Umbuzo wokubumbana kwe-fiction:
Ucwaningo luye lwabonisa ukuthi i-12% yokulimala kwabadlali be-basketball yenzeka ngesikhathi sokuphola endaweni. I-coeffanele yokushayisana kwephansi lezemidlalo libonisa ukuthi phansi linokuphamba ngokweqile (okunciphisa ukuguquguquka kokushintshana) noma kushelela ngokweqile (okwandisa ubungozi bokwehla). Uma ucabanga ukuhamba nokuphepha komsubathi, lo mgubho wokugcwala kufanele ube yinani elihle kakhulu phakathi kuka-0.4-0.7. I-coefficient of fiction yephansi yemidlalo ye-PVC ivame ukugcinwa phakathi kwalokhu mgubho. I-coefflements yokugcwala kwenkundla yezemidlalo ye-PVC yobungcweti ingu-0.57. Inokushayisana okwenele futhi okulinganiselayo, okungaqinisekisa ukuqina kokunyakaza futhi kulondoloze kuzo zonke izindlela zokuhamba. Ukuvumelana nokusebenza njalo kokusebenza kwezingxabano ukuqinisekisa ukuhamba okuguquguqukayo nokujikeleza okungaphakathi kokuphazamiseka ngaphandle kokuvinjwa.
5.Inkinga yokuqina kwebhola:
Ukuhlolwa kokuqina kwebhola ukulahla i-basketball kusuka endaweni ephakeme ngamamitha ayi-6,6 ungene phansi kwezemidlalo ukuvivinya ukuphakama kwe-basketball. Le datha ivezwa njengephesenti, futhi ukuphakama okuphindwe kabili kwe-basketball phansi kokhonkolo kusetshenziswa njengezinga lokuqhathanisa ukubonisa umehluko ekuphakameni okuphindwe kabili. Imithetho yemidlalo yebhola yangaphakathi idinga ukuthi umhlabathi usetshenziselwe imiqhudelwano yezemidlalo noma ukuqeqeshwa, njengebhasikidi neminye imidlalo yebhola. Ukuthathwa kokuhamba kanye namaqhuqhuva webhola. Ukuqhathanisa okwenziwe ngebhola kufanele kube kukhulu kunalokho noma kulingana no-90% Iphansi lezemidlalo le-PVC linokusebenza okuqinile nokuzinzile kwebhola, alikho iphuzu elifile elitezi phansi, futhi amandla alo okuqhathanisa okuphindayo angafinyelela ku-98%.
6.Imibuzo ngokubuya kokuzivocavoca amandla:
Lokhu kubhekisa emandleni ezemidlalo abuyiselwe yibala lezemidlalo lePVC lapho abasubathi bezivocavoca ukuze bathuthukise ukusebenza kwezemidlalo.
7.Izinkinga ngemithwalo egoqwayo:
Umthwalo ophethe umthwalo nokuqina kwamasiteji ezemidlalo abuchwepheshe kufanele ahlangabezane nezidingo zokuncintisana nokuqeqeshwa. Isibonelo, lapho i-basketball rack ehambisanayo nezinye izikhungo ezihlobene zemidlalo zihanjiswa phansi, ingaphezulu nokwakheka kwephasi kungeke kulimale. Lokhu kuyizinga leShanghai DIN. Izindinganiso nemibhalo eqondwayo yokugoqa
Iphansi lezemidlalo le-PVC Okuqukethwe okuhlobene
Ukwebiwa phansi ngokhuni kuyinto yokuqala yokucabanga abantu abacabanga ngayo, ngoba isuselwa ezintweni zokwakha eziqinile eziphezulu, ingaphezulu lezinkuni lihle, futhi umbala ufudumele. Phansi. Kod...
Umehluko phakathi kwesitezi sepulasitiki nesitezi esiqinile sokhuni
Izindawo zemidlalo zibandakanya izinkantolo ze-basketball, izinkantolo ze-badminton, izinkantolo ze-volleyball, izinkantolo ze-tennis, izindawo zokuzivocavoca, njll., Okubhekiselwa kuzo izinkantolo z...
Umphakeli wephakethe lomkhiqizi we-kingUP
Ungayikhetha kanjani i-LVT, SPC, WPC
Umakhi wephansi we-kingUP SPC
Yini okufanele uyenze uma phansi izinkuni isikhunta?
Yiziphi izindlela zokwakha phansi phansi?
Yini impahla esetshenziselwa phansi igumbi lokulala?
Uhlobo luni lwamanzi asekhaya angenamanzi futhi anemvelo enhle?
Ungakuhlanza kanjani ukungcola kothayela phansi
Likuphi phansi ifulethi le-vinyl elimnyama nelimhlophe?